Thailand: Mpitantana Tranonkala Miatrika Fitsarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2011 8:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Chiranuch Premchaiporn (fantatry ny namany amin'ny hoe Jiew), tonian-dahatsoratry ny Prachatai.com, dia nampangain'ny manampahefana ao Thailand eny anatrehan'ny fitsarana ho nanitsakitsaka ny Lalàna momba ny Heloka Bevava Atao amin'ny alalan'ny Solosaina. Prachatai, izay midika hoe “Olona Afaka”, dia vavahadin-tserasera iray tsy miankina ao Thailand.
Ny fijery ankapobeny an'ilay tranga dia natolotry ny FACT – Freedom Against Censorship Thailand. Jiew dia voapanga ho namela an-kalalahana fanamarihana folo manivaiva ny Mpanjaka mba hivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Prachatai azon'ny rehetra idirana. Efa nofafàn'i Jiew ireo fanehoan-kevitra vantany vao naharay ny fampilazàna nalefan'ny fanjakana izy saingy tsy nanakana ny manampahefana tsy hisambotra azy izany tamin'ny taona lasa. Raha voaheloka i Jiew dia hiatrika famonjana mandritra ny 50 taona.
Manana lalàna henjana momba ny fanivaivana Mpanjaka ny ao Thailand. Ary tena mahesisetra mihitsy amin'ny fanakànana ireo tranonkala heverina ho manivaiva ny mpanjaka. Nihahenjana ny sivana tamin'ny taona lasa iny nandritra ny fepetra amin'ny tany tsy milamina ho valin-kafatra tamin'ny hetsik'ireo Lobaka Mena mpanohitra ny governemanta. Novinavinaina ho 425.296 raha kely indrindra ireo pejinà tranonkala voasakana tao Thailand..
Manara-maso akaiky mihitsy ny fitsaràna an'i Jiew ireo mponin'ny aterineto, ny mpanao gazety ary ireo mpiaro ny zon'olombelona. Manana tatitra isanandro mikasika n y fitsaràna an'i Jiew soratan'i CJ Hinke ny Global Voices Advocacy. Fitsarana dimy no efa natao tamin'ity volana ity – Andro voalohany, faharoa, fahatelo, faha efatra, ary fahadimy. Nahemotra ho amin'ny Septembra amin'ity taona ity ny datin'andro hanaovana ny fitsarana manaraka .
New Mandala dia mandefa tafatafa iray niarahany tamin'i Jiew mikasika ny fomba fahitàny ny toerana misy ny fampahalalam-baovao ao Thailand
Thai Netizen Network dia nandroso volavolam-panitsiana ny Lalàna momba ny Heloka Bevava Atao amin'ny alalan'ny Solosaina izay zary ampiasaina hanakendàna ny fahalalahan'ny fampitam-baovao
Ny bilaogy FreeJiew dia noforonina mba hanohanana ny ady ara-dalàna atrehan'i Jiew.